Ubuntu install မ ရ လို. ကူညီ ကြ ပါ။ - MYSTERY ZILLION
Ubuntu install မ ရ လို. ကူညီ ကြ ပါ။
September 2008 edited September 2008 in Ubuntu
Ubuntu 8.04 i386.iso က install လုပ် ရင်
35% လောက် ရောက် ရင် internet connetion ယူခိုင်း တယ်
retry နဲ. cancle .box လေး ပေါ်လာ တယ် ...
cancle ကို နှိပ် လိုက် ရင် install က ပိတ် သွား တယ် ()
ကျွန်တော် က harddisk ထဲ က install လုပ် တာ ...
if u free plz help me ,
i try to find in the forum but i didnt see any problem like that
may be i cant see
so please help me if u can
ဒီမှာ ဆက်ဆွေးနွေးပေးပါလား။ http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=293
အဲမှာ ကိုစေတန်ရေးထားတဲ့ Ubuntu Install စာလုပ်လည်း ယူလို့ရတယ်။